मुखमा र जिब्रोमा खटिरा आए के गर्ने ? – Sanchar Patrika
मुखमा र जिब्रोमा खटिरा आए के गर्ने ?
October 8, 2020 364
काठमाडाैँ । मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठलगायत मुखको कुनामा र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ आउने समस्याले तपाईँलाई पनि हैरान बनाएको हौला । यस्तो घाउ स–सानो एक वा धेरै मात्रामा आउन सक्छ । त्यस्तै योे समस्या बढेर जटिल भई घाऊ ठूलो र गहिरो भएर खान, बोल्नै नहुने किसिमको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा लगातार दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, घाँटीको ग्रन्थि सुन्निने, दुख्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ ।
खासगरी शरीरमा पोषणको कमी (भिटामिन बी, सी, आइरन, प्रोटिनलगायत भोजनमा रेसादार खानाको कमी आदि) ले मुखमा घाउ हुन्छ । यसरी नै दाँत नमाझ्ने, खाना खाएर कुल्ला नगर्ने जस्ता सरसफाइको कमी, पेटसम्बन्धी रोगहरू (कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस वा अम्लपित्त, अपच आदि), पानीको कमी भएमा पनि मुखभित्र खटिरा आउने गर्छ । ब्याक्टेरिया तथा फङ्गसको संक्रमण, बढी तातो, मसलाहरू वा बढी अम्ल भएको खानपान गर्दा मुखभित्र वरपर घाउ आउने गर्छ ।
हल्का उम्रेको गेडागुडी बिहान खाने
बारम्बार समस्या भैरहेमा वा विभिन्न रोगको कारण पनि मुखमा घाउ आउन सक्ने भएकोले चिकित्सक समक्ष जाँच गराउनुपर्छ । तर, मुखमा आएको घाउ कस्तो छ, किन आएको हो भन्ने कुरा रोगको इतिहास, व्यक्तिगत बानी व्यवहार, लक्षणका आधारमा विशेषज्ञसँग जाँच गराएर थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा घाउको मासु वा पीप लगायत रगतको अन्य परीक्षणहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Prevअत्याधुनिक प्रविधी सहितको नेपालकै ठूलो गाई फर्म //मेसिन बाटै दूध दुहुने//करोडौँको आम्दानी//Cow Farm
Nextकतारमा हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् काम अनुसार दूतावासमा सम्पर्क गर्ने ठेगाना